ညီလေးအလင်းဆက်သို့ ခေတ္တ ခဏမျှ ….. နှုတ်ဆက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » ညီလေးအလင်းဆက်သို့ ခေတ္တ ခဏမျှ ….. နှုတ်ဆက်ခြင်း
ညီလေးအလင်းဆက်သို့ ခေတ္တ ခဏမျှ ….. နှုတ်ဆက်ခြင်း
အကို့အနေနဲ့ ဒီ Post က အရေးပေါ်ရေးလိုက်တဲ့စာပါညီရေ……
အချိန်မရတာထက် .. ရှင်းရမှာကြောင့် .. နောက် Post တွေကို မမျှော် သေးဖို့ အောက်က ရေးလက်စ
Comments တွေကိုပဲ Copy ချပေးလိုက်ပါတယ်….. ဖတ်ကြည့်တော့ကွာ….
အလင်းဆက် အပါအဝင် …. အားလုံးပဲ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်…
ခက်တာက ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာ .. ကျွန်တော့်အမြင်အမှန်လို့
ကျွန်တော့်ခံစားချက်ကို ပဲ ပြောခဲ့တာ…
လေးလေးစားစား နဲ့ ကျွန်တော်မှားချင်လည်း မှားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်…..
မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် …
နောက်ဆုံး… အလင်းဆက်လေးကိုပြောရေးရေးနေတဲ့ Post မှာတောင် ညှီတယ်တွေ
(၁) ကနေ (၃) အထိ ဒီလိုစာတွေကြည့်ပဲလားလို့ ဖတ်ပြီးကြပြီလား…. ဒီတစ်ခဏ အမြင်နဲ့ တုန့ပြန်ကြတာပါ…………..
မှန်ပါတယ်.. ကျွန်တော်လည်း မရင့်ကျက်ပါဘူး…
သို့သော် .. မရိုင်းစိုင်းပါဘူး…
ဒီတော့ နှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ ရွာပြင်ပြန်ထွက်ပါတယ်….
အလင်းဆက်သို့ ဒီ Comments လေးကို ပေးပေးပါ..
ညီလေး အလင်းဆက်သို့ …………………
ပြောရင် ဒီလိုပဲတုန့်ပြန်မယ်ဆိုတာကို သက်သေဆက်ထူလိုက်တာပါ….
တစ်ချိန်ချိန်မှာ အကိုလည်း အမြင်ပြောင်းလာရင်ပြောင်းလာနိုင်သေးတာပဲနော်…………
အကိုပို့ပေးရမယ့် စာလေးရှိနေလို့ပါ… ညီလေး ကဗျာရေးရင်လည်း ပို့ဖို့ပေါ့ကွာ……
အဓိကကတော့ လေးတင်ခန်း လေးကြိမ်းကြိမ်းတဲ့ ဇာတ်စာတစ်ခုကို အကိုရေးလက်စမတင်ဖြစ်တော့တာ
ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်လို့…….အမှန်ကတော့ ညီလေးရေ Post တွေက စုစုပေါင်း အပိုင်း(၁၂) အထိချိန်ထားတာပါ။
ဦးပါ … ဦးဆာ ….ဇီဇီ….မှစပြီး အားလုံးကို ခင်မင်လျှက်ပါလို့…..
ကိုရွှေညာသားရေ လူမှာ မျက်လုံးတောင် တောင်တဖက်မြောက်တစ်ဖက် နှစ်လုံးရှိသေးတာဘဲ လောကကြီးအမြင်မတူတာ အဆန်းမှမဟုတ်တာဗျာ
စာရေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ချစ်ကြောင်းကြိုက်ကြောင်း ရည်စားစာကလွဲလို့ ကျန်တဲ့စာတော်တော်များများကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထက်ပိုသော စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကို ဖတ်စေချင်တတ်ကြမှာပါကိုရွှေညာသားလည်း အဲလိုမျိုး တစ်ဦးတစ်ယောက်မဟုတ်သော စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကို ဖတ်စေလိုလို့ရည်ရွယ်ပြီးရေးတာဆိုရင် စာရေးခြင်းကိုရပ်စရာမလိုဘူးလေ
ကျွန်တော်ဆို ကျွန်တော်ရေးချင်ရာရေးတင်တဲ့အခါ ရွာသူားတွေ ဖတ်မန့်တာထက် ဒီဆိုဒ်ကို ဖွင့်ဖတ်မိတဲ့ မန်ဘာမဟုတ်သော စာဖတ်ပရိတ်သပ်တွေဖတ်ဖြစ်သွားရင်ဖြင့်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ရေးတင်နေစဲပါ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီဆိုဒ်ရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သပ်အဖြစ်အရင်ဖြစ်ပြီးမှာ မန်ဘာဝင်ကာစားရေးဖြစ်တာမို့လေ
ကိုယ်ထင်တာ သိတာ တွေးတာ မြင်တာတွေကို ဝေမျှခွင့်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်နေပြီးမှရေငုံနှုတ်ပိတ်နေမယ်ဆိုရင် ဒီနေရာရဲ့ အသီးအပွင့်ကို ကိုယ်မရတာနဲ့ အတူတူပါဘဲဗျာကိုယ်ဘဲအခွင့်အရေးရှုံးမှာလေစဉ်စားပါဗျာ ပြီတော့ စာဖတ်သူဆိုတာလည်း ဖတ်ပြီးတဲ့စာတစ်ခုပေါ် ဝေဖန်လေကန်ခွင့်ရှိတယ်လေ ဒါလည်းစာဖတ်ပရိတ်သပ်ရဲ့ အခွင့်ရေးကိုး။
ပြီးတော့လေ နည်းနည်းပါးပါး ပေါက်ကွဲတတ်တဲ့လူမျိုး တွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ သိပ်အရေးမကြီးပါဘူး။ အထက်က ကိုခ ပြောသလိုပဲ ထပ်မံပြောပါရစေ။
ဂျီးဇက်ခရိုက်စ်ရော.. မိုဟာမက်ရော.. ဗုဒ္ဓရော… တယောက်မှ.. အဲ…အဲ.. တပါးမှ…
အပြောမလွတ်နိုင်တာပဲ.. ဟာပဲ..ဟာကို.. ပဲဟာပဲကိုဗျ….
ဟိန္ဒူဆာဒူးကြီးတွေလို… ထေရာတို့ရဲ့ဝါဒလိုက်သမားတွေလို.. မလုပ်မရှုပ်မပြုတ်လမ်းလိုက်ဗျ..
အကိုဂျီးးး(cd to A Yee)
ကျုပ် အလုပ်များးးနေတုန်းးး ဘာတွေ ဖစ် ကုန်ကြ တုန်းးး???
တစ်ချို့ နဲ့ အများးးး လဲ တော့ မလို့ လားးးတော် ရဲ့????
စိတ်ပြေ လက်ပျောက် နားးချင်နားးးပြီးးး ပြန် လာ ခဲ့ ပါတော်။
ကျုပ် က ခင်ညားးး ကို ချစ် သဗျ။
လောက မှာ ကိုယ် ဘာကို ယုံကြည်တယ် မယုံကြည်ဘူးးးး အမုန်းးးခံ ရဲရဲ ပြောရဲ သူဟာ
သာကူးးးးတွေထက် များးးးကြီးးးး များးးကြီးးး ရိုးးးသားးး တယ် လို့ ခံစားးးးရ လို့ ပါ။
အမှန်တရားမျိုးစုံ ရှိနေတဲ့ လက်ရှိ ပိုစ့်မော်ဒန်ခေတ်ကြီးမှာ
ကိုယ့်အမြင်မှ အမြင်မှန်လို့ တယူသန်လို့မရတာ။
ကိုယ့်အမြင်နဲ့ သူ ့အမြင် မတူရင် လွတ်လပ်စွာ ကွဲပြားခွင့်ရှိတာပဲ။
မတူတာနဲ့ ဆန့်ကျင်တာတောင် မတူပါဘူး။
ဒီအရည်တွေ မြင်လို့ ကိုရွှေညာသားရဲ့ ပိုစ့် အပိုင်းသုံးမှာ
ကဗျာပိုင်းကိုပဲ သီးသန့်ကျကျနန ဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တာရယ်။
ဒါတောင် အဲ့ကဗျာတွေက ကျနော်ချစ်သော ကဗျာသာ
ကျနော်စွဲလမ်း၍ကျနော်ရေးချင်သော ကဗျာများ မဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အကြိုက်ကြီးမဟုတ်လို့ မခံစားဘူးကွာဆိုပြီးနေလိုက်ရင်
ကဗျာဆို ကဗျာမှန်သမျှကို ချစ်နိုင်ရမယ်။ ချစ်နိုင်သော နှလုံးရည် ပြည့်ရမယ်ဆိုပြီး ဒါလေးတွေ ဝင်ပြောရုံ။
ညှီတဲ့ကဗျာတွေ ခါးအောက်ပိုင်း ကဗျာတွေလို့ ရုတ်တရက် ထင်ကုန်ကြမလားပဲလို့ ထိတ်ခနဲဖြစ်လို့
အဲ့ဒီ ညှီယောင်ဆောင်ထားတဲ့ကဗျာလေးတွေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းမှု
အနုနဲ့ ပညာကို ဆွဲထုတ်ပြမိသေးတယ်။
အဲဒီပိုစ့်မှာ ကျနော်ရယ် ကိုရွှေညာသားရယ်
ကဗျာအကြောင်း စာအကြောင်း သီးသန့်ပြောခဲ့ကြတာပဲ
အဲဒီ ကဗျာအကြောင်း ပြောရတာကိုပဲ ကျနော်တို့ ရသမြောက်ခဲ့တယ်။
ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ကဗျာအကြောင်း စာအကြောင်းသက်သက်တွေ
ရသဆိုတာ ရှာတတ်မှ တွေ ့တဲ့ ကမ႓ာမြေရဲ့လက်ဆောင်ပါ။
ကိုရွှေညာသား အခုလောလောဆယ် စိတ်ထဲမှာ ခါးနေတယ်ဆိုရင် ခဏ အနားယူပေါ့။
ကဗျာအကြောင်းတွေ စာအကြောင်းတွေ ဆက်ပြောကြမယ်
တခြားးးဘာာာာမှ မပါတဲ့ ကဗျာအကြောင်း စာအကြောင်းပေါ့။
အခု မတင်တော့ပဲ ရပ်လိုက်မယ့် ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကို ကျနော်
ကျန်တာတော့ မေးလ်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပြောပါဦးမယ်။
လောလောဆယ်တော့ ဒါလောက်လေး ဝင်ပြောခဲ့ပါရစေနော့
(အစ်ကို့ မေးလ်ကို ကျနော် အပ်ထားပါတယ်။ )
အမ်မာ.. ထွက်တာတောင် ယိုးဒယားကလေးထွက်လို့… ထွက်မှာဖြင့် မြံမြံထွက်.. ဗယ်သူမှ မဆွဲပါ။ ရွာသဂျီး ဦးမာမွတ် စကားယူသုံးရလျင် ယွှေညာသားမှာ မြန်တျန့်အကျင့် ၁၀၀% ရှိ၏။ သူများကို ပြောမယ် ဆိုမယ်၊ ကိုယ့်ပြန်အပြောခံရလျင် ရိုင်းတယ်၊ မရင့်ကျက်ဖူး ဦးအောင်ပြောမယ် အိညှက်အိညက်လုပ်မင် ငိုချင်းချမယ် အော်ချက်ထုတ်မယ် ကိုယ့်ရေအိုင်လေးထဲမှာ ငါးမန်းဂျီးလုပ်မယ်.. အဲဒလိုလူမျိုး ဘယ်တော့မှ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မတန်.. ။ ဘိန်းစားဂျင်းအတူတူ တမတ်ဖိုး ပိုရှူ မချဉ်စမ်းပါနဲ့.. တရုတ်ကပေးမည့် ပရောဂျက်သာ ရအောင် လျှာပါတော့ဗျာ…။
ကြက်ဆင်ပုလိပ်ဆိုတာ ဥပဒေလေးစားကြောင်းပြပါခင်ဗျာ ဟီဟိ
(ကျနော် လျှာ မယားဘူး )
ယားတဲ့ လူ ပြောရဲလိမ့်မပေါ့ဗျာ။
ခီညားမို့ ဦးကြောင်ဘက် အတင်းဆွဲလှည့်ပေးတယ်
နောက်ပြီး ကြုံလို့ ပြောပါဦးမယ်။
ရွာထဲ စီခနဲထဖြစ်ပြီဆိုမှ ကိုရာမညဂျီး ရောက်ရောက်လာတယ်ေ်
ပြီးတော့လေ ကျနော်နဲ့ တခြားတယောက်ယောက်နဲ့ အတေ့အဆိုင်လေး စီခနဲဖြစ်ပြီဆို ကျနော်တော့ ကိုရာမညကို ပြေးသတိရတတ်ပြီဗျို့
ကျနော့်ကို တခြားဘက်ကနေပြီးး ဆွမ်းကြီးလောင်းမယ့်သူအဖြစ်နဲ့ သတိရတာလေ။ ဟီဟိ ။
အဖြစ်အပျက်တွေ လူတွေ အကြောင်းအရာတွေသာ ပြောင်းချင်ပြောင်းမယ်
ကျနော့်ကို ဆွမ်းကြီးဝင်လောင်းမယ့် ဘက်တော်သားတွေက မပြောင်းဘူးဗျ။
ကျွန်တော်တို့ ကိုအိမ်လွမ်းသူတို့က အညတရ မန်ဘာတွေပါခင်ဗျာ
ကိုကြောင်ကြီးကို ဆရာကိုအလင်းဆက် မပြောရဲဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်နားလည်သွားပါပြီ
ကျနော် စိတ်မဆိုးပါဘူး။ စိတ်ပျက်တာပါ။ စိတ်ပျက်တဲ့ဆိုတာ စိတ်ကြီးပျက်စီးသွားတာ မဟုတ်ဘူးဗျ ။ ဒီလိုတွေပြောနေရတာကို အော်ဂလီဆန်လာတာဆိုပါတော့ဗျာ
စတာက ကိုရွှေညာသားရဲ့ ပိုစ့်ထဲက ကဗျာတွေကို
အကြမ်းဖတ်ရုံ ဖတ်ပြီး ခါးအောက်ပိုင်းကဗျာတွေ လို့ သတ်မှတ်တာကို
ကျနော်က အဲ့ဒီကဗျာတွေ မညှီကြောင်း ဝင်ပြောတာ
ကဗျာသဘောတရားလေးတွေ အပြန်အလှန်ပြောကြဆိုကြလို့ ရမလားလို့ပါ။ ဒါပေမယ့်. . .
ဒါပေမယ့် ကျနော် ကိုအိမ်လွမ်းသူရဲ့
ကိုရွှေညာသားကိုပေးတဲ့ comment ကို သေချာပြန်ဖတ်တော့ ကဗျာကို တိုက်တာ မဟုတ်ပဲ လူကို တိုက်တာဖြစ်နေတာ
ဒီတော့ ကဗျာကိစ္စ မဟုတ်တော့တဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြား ဝင်မပါချင်တော့လို့
ဂဇက် စည်းကမ်းချက်နဲ့တောင် ငြိနေမလားပဲ လို့ ပြောပြီး
အဲ့ဒီ ကိစ္စ ရပ်လိုက်တော့မလို့ပဲ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ ကိုရာမည ဘွားခနဲပေါ်လာတယ်။
ကျနော့်ကို အစကတည်းက မကျေနပ်တဲ့ အရိပ်အယောင်ပြနေသူပီပီပဲ
ကျနော်နဲ့ ဦးကြောင်ကို လှည့် ရန်တိုက်ပေးတယ်။
တော်တော် ပေါတဲ့ တိုက်ကွက်ပဲဗျ ။
အဲဒီလို ရန်တိုက်ပေးလိုက်တာဟာ ကြားဝင်ဖြန်ဖြေနည်းလား
ဦးကြောင် ရဲ့ comment တွေကို တစ်ယောက်ယောက်က ဂဇက်စည်းကမ်းနဲ့ လိုက် ပိတ်ရဲလား မပိတ်ရဲဘူးလားဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကြီးနဲ့ ကျနော့်ကို တည်ပေးတာ။
ထားတော့။ ကိုရာမညက ကိုရာမည ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တည်ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်က ကိုအိမ်လွမ်းသူရဲ့ comment ဟာ စည်းကမ်းနဲ့ ငြိနေတယ်လို့ ပြောရင်
ဘာလို့ ဦးကြောင်နဲ့ လှည့်တိုက်သတုန်း။
တိုက်ပေးတိုင်းရော ကျနော်တို့က ဖြစ်ရမှာလား။
ကျနော်က ခပ်နောက်နောက်နဲ့ ရှောင်ထွက်လိုက်တော့
ဟောာာာ အခု နောက်တစ်မျိုး လှည့်သွားပြန်ပြီ။
မန်ဘာအချင်းချင်းမှာကို အလင်းဆက်တို့က ဆရာဆိုတဲ့ သဘောမျိုး
super member ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပြောလာပြန်ပြီ။
အာဏာရအဖွဲ့ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ လှည့် တိုက်ပြန်ရော။
နောက်ဆုံးတော့လည်း ဒီဘူတာပဲ ဆိုက်တာပါလားဗျ ။
ဆိုတော့ အဲ့ဒီ အညတရ မန်ဘာတို့ super memberတို့ ခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့ စိတ်က ကိုရာမညတို့ စိတ်ထဲမှာ
မကျေနပ်ချက် အစိုင်အခဲလေး ဖြစ်နေတာများလား။
ဒီလို ကျနော်ပြောလို့ နောက်လူတွေနဲ့ လှည့် တိုက်ပေးချင်ပေးဦးမှာ။ ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး ။
ဒီ comment ပြီးရင် ဒီကိစ္စ ကျနော်
ဆိုတော့ဗျာ. . .
ကိုရာမညတို့က ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အညတရမန်ဘာလို့ သတ်မှတ်တယ် ။
ခင်ဗျားတို့သဘောပဲလေ။ ကိုယ် ယူတာ ကိုယ်ရမှာပဲ။
ကျနော်တို့ကို အာဏာရအဖွဲ့ လို့ သတ်မှတ်ပေးတယ်။
ဒါလည်း ခင်ဗျားတို့ သတ်မှတ်ချက်ပဲ။
ခင်ဗျား သတ်မှတ်ပေးလိုက်လို့ ဖြစ်သွားတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘာမှလည်း ထူး မသွားဘူး။
ကိုရာမညက ကျနော့်ကို တောင်းပန်တယ်။
ကျနော်ကတော့ ဘယ်သူမှ မမှားဘူး လို့ ယူဆတဲ့အတွက် တောင်းပန်တာကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ခြင်း ခွင့်မလွှတ်ခြင်းမရှိ/ ကျနော့်အတွက်မလိုအပ်ဘူး။
ဒီတော့ ကိုယ့်ဘာသာ တောင်းပန်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာပဲ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပေတော့ဗျာ။
ကိုကြောင် — ကိုရွှေ့ညာသားမှာ အပျိုပေါက်သမီးချောချောလေး နှစ်ယောက်တောင်ရှိသတဲ့။
ဦး​ကြောင်​က​တော့ ​ဂေဇက်​မှာ ​ကြောင်​ဂျီး လုပ်​တယ်​​ပေါ့။ ​ငါးမန်​းဂျီးက​တော့ သူ့ဘာသာ​နေတာ. ​ကြောင်​ဂျီးက​တော့…အားလုံးကိုလိုက်​ကုတ်​​နေတာပဲ။
စာရေးကောင်းသူတစ်ယောက်ကို အကြာကြီး မဆုံးရှုံးချင်ပါဘူး ၊
အမြင်မတူတာတွေကတော့ တစ်အိမ်ထဲမှာတောင် ရှိနိူင်သေးတာပဲဗျာ ၊
ကိုယ်ယုံကြည်ရာဟာ ကိုက်ယုံကြည်ရာပါပဲ ၊
အမြင်မတူတိုင်း စကားများနေရမယ်ဆိုရင် ရှေ့ရောက်ရန်မမြင် ၊
ကိုယ်ယုံကြည်ရာဟာ ကိုယ်ယုံကြည်ရာပါပဲ ၊
အော် ……………………ဘာလို ထွက်ရမှာလဲဗျ
ကိုယ်နှစ်သက် တာ ကိုယ်မြင် တာ ကိုယ်ရေး လို့ ရတယ်လေ
အမြင်တူ တာ မတူ တာတော့ ရှိကြမယ်
ကျနော်တို့ရွာထဲမှာ ကော်မင်း မပေး ဘဲ စာဖတ်နေသူ တွေရှိတယ်
ကျနော်တို့ စာရေး သူတွေ ကအဲဒီလူ တွေရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့် ရမယ်လေ
ဒီမယ် အစ်ကိုကြီး ရဲ့
ရွာထဲမယ် တစ်လ ကျော်ကျော် တစ်ခါ အမြဲ ဘဲ ရွာခါ တတ် တယ် ဆိုဘဲ။
ကျွန်မတို့ သူကြီးမင်း ရဲ့ လက်ဆယ်ချောင်း ထောင်လိုက် တိုင်း ဒီ လို အခါ ခံ ရတာ တဲ့။
မယုံရင် ပြန် စစ်ကြည့်။
ကြည့်ရတာ အခု လဲ နှစ် တစ်ရာ လုပ်ပြန်ပြီ ထင်ရဲ့။
အခါ မခံ လိုက်စမ်းပါနဲ့ ။
ရွာစည်းရိုးကို မြဲမြဲ ကိုင်ထားစမ်းပါ။
ရွာထဲ ကာလသား တွေ က စိတ်ထဲ ရှိရာ ဒီလို ရှင်းရှင်းပြောတတ်တာ။
ဒါပေမဲ့ ခဏ ဆိုတော့ ပြန်လာမှာ ပါ။ မဟုတ်လား။ :-)))
လျှာမည ဆိုတဲ့ကောင်ကို လဗြင်ထွဋ်..
Democracy မှာ အာဏာပိုင်ရှိတယ် အတိုက်အခံရှိတယ်…6နဲ့9 လို ့ပေါ့ဗျာ….
သူ ့ဘက် ကြည့် သူအမှန် ကိုယ့်ဘက်ကြည့် ကိုယ်အမှန်ပေါ့….
ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူဆိုတာလည်း လူ ့သဘာဝပါဗျာ….
လျှာနဲ ့သွားတောင် ခနခန ကိုက်သေးတာပဲ….
တစိမ်းနဲ ့ဆို ပိုကိုက်တော့မှာပေါ့…..
ရွာထဲကတော့ မထွက်ပါနဲ ့ဗျာ….
တခါတလေတော့လည်း အဲ့လို ဆူဆူပူပူရှိမှ နေလို ့ကောင်းတယ်လို ့ထင်သဗျို ့…
အဲ့ကြောင့်လားမသိဖူး… တခါတလေတော့လည်း သမ္မတနဲ ့တူတော့ သဂျီး ကလည်း အာစေးနေတာ…
မထွက်နဲ ့….. ပြန်ချ…. လက်မပါရင်ပီးရော….. ဟီး
ဟေ့..ဟေ့ ပြန်မလာနဲ့နော်.. ပျော့ပီးစလစ် နံပြားညှစ်…
ဒီရွာထဲမှာ ရန်ဖြစ်တိုင်းမကျေနပ်တိုင်းသာထွက်ရမယ်ဆိုရင် လူတောင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး ကိုရွှေညာသားရယ်။ ကျွန်မတို့လဲ မကျေနပ်တာတွေ ရန်ဖြစ်ကြတာတွေရှိခဲ့ဖူးတာပဲ။ ရှိလဲရှိနေဆဲ နောင်လဲရှိနေအုံးမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူလို့ ဆိုတာလေးနဲ့တော့ မထွက်စေချင်ပါဘူး။ အမြင်ဆိုတာ ဒီတချိန်တူတတ်ပေမဲ့ ခဏနေကွဲချင်ကွဲတတ်တာပဲလေ။ အဲ့တော့လဲ တူတာလေးယူ မတူတာလေးဖယ်ပြီး ဆက်ချီတက်ကြရအောင်လား
အချော့ခံချင်လို့. . .
ဟေ့လူရီး ကိုချွေညာတား ပြန်ထွက်လာပါဗျ
ဒီရွာမှာနေရင် အရေခွံထူမှ ရမှာဗျ ။